श्रीमतीका सबै कपडा ज’लाउँदै, यि पतिले आ’क्रोश पोख्दै यस्तो गरे (भिडियो हे’र्नुहोस)
[ November 29, 2021 ] उप`चार गराउँदा चम्सुरी घर बेच्ने अवस्थामा पुगिन् ,पानी नपिएको ५ महिना भयो (भिडियो हेर्नु`स्) समाचार
Homeसमाचारश्रीमतीका सबै कपडा ज’लाउँदै, यि पतिले आ’क्रोश पोख्दै यस्तो गरे (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 23, 2021 admin समाचार 4008
श्रीमान् श्रीमति मिलेर घर बे’चे । नयाँ घर बनाउने भन्दै पुरानो घर १ करोड २ लाखमा बे’चियो । अहिले श्रीमति र श्रीमान् बिच खट’९पट भएको छ । घर बेचेको पैसा लिएर श्रीमती हिँडेपछि श्रीमान वे’चौन भएका छन् । उनीहरुका छोरा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलियामा छन् । विवाह गरेको २२ वर्ष पछि उनको श्रीमती डि’भोर्स चाहन्छिन् ।
विवाह गरेको २२ वर्ष सम्म पनि श्रीमतीले किन थापा लेखिन् रु र’हस्य त यस्तो पो रैछ उनका श्रीमान भन्छन्, कुँव’रसंग विवाह गरेर पनि श्रीमतीले थापा लेख्दै आएकी रैछ । श्रीमती किन त्यसरी घरवाट ग’इन् भन्ने कुरा भने आफुले थाहा नपा’एको बताए । १०४ वर्षको बृद्ध वुवा र ९० वर्ष भन्दा बढी भएकी आमालाई छो’डेर श्रीमती हि’डेपछि यिनी निकै बेचै’न भएका हुन् ।
अहिले उनले घरमा भएका श्रीमतीका सबै लुगा नि’कालेर जला’एका छन् । जहिले पनि माइतीको सम्प’त्ती भनेर त ‘ना व दिने गरेको बताउँछन् । मैले दुख गरेर क’माएको सम्पत्तीलाई मेरो माइतीको स’म्पत्ती भनेर दा’वी गरेको उनको भनाई छ । श्रीमतीको माइतीको सम्प’त्ती खान पर्यो भने म यहि बाग्म’तीको गुहुँ खान्छु, उनले भने ।
श्रीमति र’कम सहित ‘सम्पर्क बि’हिन भएको भन्दै श्रीमान् रुँदै मिडि’यामा आएका छन् । प्रस्तुत भिडियोमा श्रीमतिको तर्फ’का कुरा भने समे’टिएका छैनन् । श्रीमति के कति कारण’ले सम्पर्क बिहि’न भएकी हुन् भन्ने यो भिडि’योमा भने प्रष्ट छैन ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका ९जोरपाटी० का नारायण कुमार कुँवर उक्त गुनासो गर्दै मिडि’यामा आएका हुन् । उनकी श्रीमति शान्ति थापा रक’मसहित गएको र सम्पर्कमा आउन नचा’हेको नारायणको आरो’प छ । – ओएस नेपालबाट
सामूहिक रुपमा भेला भई, होली नम’नाउन आग्रह
भारतिय टिभि सिरियल ‘साथ निभाना साथिया’की संस्कारी बुहारी गोपीले डान्स गरेको भिडियो शेयर गरेको केहि घण्टामे लाखौले हेरे – हेर्नु’होस् भिडियो
April 17, 2021 admin समाचार 4215
भनिन्छ हिन्दु धर्ममा भगवा’न शिवको महिमा अपरम्पार छ । शिव हिन्दू धर्मका प्रमुख दे’वताहरू मध्येका एक हुन् महादेव । महादेव, परमेश्वर आदि नामले चिनिने भगवान् शिवलाई प्रायःजसो शिवलि’ङ्गको रूपमा पूजा गर्ने ग_रिन्छ। चाडै नै प्रसन्न
बलिउड अभिनेत्री मौनी रोयले गरिन् इंगेजमेन्ट, को हुन् त उनका मंगेतर ?
October 29, 2020 admin समाचार 7797
पछिल्लो सम’यमा बलिउड कलाकार’हरुको इंगेजमेन्ट र विबाह गर्ने होडबा’जी नै चलेको छ । यस्तै होड’बाजी चल्ने क्रममा भर्खरै प्राप्त जानकारी अनु’सार बलिउड अभि’नेत्री मौनी रोयले पनि इं’गेजमेन्ट गरेको तस्वीर आफ्नो अफि’सियल इंस्टा&ग्राममा पोष्ट गरेकी छन्
मेलिना र सिएलको गीतमा, छाउपडी प्रथालाई जस्ताको त्यस्तै देखाए निकेशले(भिडियो हेर्नुहोस्)
December 23, 2020 admin समाचार 5514
गायिका मेलिना राई र सिएल शर्माले स्वर रहेको बाँ’चुन्जेल बोलको गीतको भिडियो सार्व’जनिक गरिएको छ । जसमा किशोर सुवेदीका शब्द शृजना समावेश छन् । २१ औँ श’ताब्दिमा पनि नेपाली समाजमा छाउपडी प्र’था विधमान छ ।
उप`चार गराउँदा चम्सुरी घर बेच्ने अवस्थामा पुगिन् ,पानी नपिएको ५ महिना भयो (भिडियो हेर्नु`स्)
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (222964)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (214975)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214651)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (212956)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211835)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210791)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209390)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209282)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (195027)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (177946)